REENOEMANN: June 2009
ကုသိုလ်ရေး တရားသံတွေ ဝေနေပြီ
ကျွန်တော် တရားသံတွေ နာရတယ်
နာမည်ဆန်းဆန်း ကြားရင် ကျွန်တော် ပြုံးမယ် ကျွန်တော် ပျော်မယ်
စာကလေးတွေ အသိုက်ဆောင်ရင် နွေရောက်ပြီ
ကျွန်တော် ငှက်ကလေးတွေကြည့်ကြည့်နေတာ သူတို့မမြင်ပါ
ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဆိုပူဇော်ပွဲ အသံတွေ ကြားရတယ်ဗလီက၀တ်ပြုနှိုးဆော်သံတွေကြားရတယ်
ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဆီက ခေါင်းလောင်းသံတွေ ကြားရတယ်
အခြား ဘာရောင်းမှန်း ကျွန်တော်မသိတဲ့ သူလေး တွေလည်းရှိတယ်
ကျွန်တော် သိသိ မသိသိ
သူတို့လည်း ကျွန်တော် ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်နေတာ မမြင်ကြပါ။
ဇာတ်သဘင်အဖွဲ့တွေ ဆိုကြတယ် ကကြတယ်
ညဘက်တွေမှာ အသံတွေဟာ အဆူညံဆုံးပေါ့
ဘုရားပွဲလား ကျွန်တော်တို့ငြင်းကြတယ်(နှစ်တိုင်း အခါတိုင်းပဲလေ)
စပါတ်ကလင်အချစ်နဲ့ ချော့တယ်၊ ကတယ်
ပုစွန်ဆိတ်ကလေးနဲ့ ချော့တယ်၊ ကတယ်
ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ခါတစ်ခါ တစ်ယောက်တည်း ထကတယ်
ခါတစ်ရံ ညကောင်းကင်မှာ အစီအရီပေါ့
လွှတ်တဲ့သူတွေကို ကျွန်တော် မမြင်ရပါ
ကျွန်တော်တို့ဆီ စာတွေ၊ ဂျာနယ်တွေ၊ စာအုပ်တွေ
ကျွန်တော်တို့လည်း စာတွေမှန်မှန်ရေးပြီး ထည့်တယ်
ကျွန်တော် နေ့စဉ် သတင်းစာနှစ်စောင်ကို
ကြော်ငြာတွေဖတ်တယ် ကြေညာချက်တွေ ဖတ်တယ်
ပြည်တွင်းသတင်းတွေဖတ်တယ် နိုင်ငံတကာသတင်းတွေ ဖတ်တယ်
လူတွေဟာ ရုပ်မြင်သံကြားမှာ ဘောလုံးပွဲတွေကြည့်ကြတယ်
ဂိုးဝင်၊ ဂိုးလွဲသွားတဲ့အခါတွေမှာ အော်သံတွေ ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်
အဲသည့်ရထားဟာ ထွက်တာလား၊ ဆိုက်တာလား
ထွက်လည်း ဒီရထား၊ ဆိုက်လည်း ဒီရထားမို့
စာအုပ်တွေကို ကျွန်တော် လူကြုံနဲ့ဝယ်တယ်
ကျွန်တော်လည်း စာအုပ်ဆိုင်ကကောင်မလေးကို သိတယ်
ကျွန်တော် ယနေ့ထိ စာအုပ်တွေဝယ်နေတုန်းပါပဲ။
ကျွန်တော်က ကျွန်တော်နေတဲ့မြို့ကလေးကို မမြင်ဖူးပါ
ကျွန်တော်နေတဲ့မြို့ကလေးကလည်း ကျွန်တော့်ကို မမြင်ဖူးပါ
ဆရာ ကိုယက္ခ ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သက်မိ၍ ပြန်လည်ခံစား တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ree Noe Mann at 12:15:00 PM 12 comments:
အရီးလှအုံဆီလာသာ မအိမ်ကံ။ သမီးက နေ့နေ့ညည ခဏခဏ အဖျားတက်လို့ ကြည့်ခိုင်းလို့ လာသာ။ နေကောင်းကြလား။ ငါဖြင့် စိတ်သာရောက်သယ် လူမရောက်နိုင်ပါဘူး သူငယ်ချင်းမရယ် ရွှေမှုံက စကားပြောရင်း ၀ိုင်းထဲဝင်လာတော့ မအိမ်ကံလည်း လိုက်လာခဲ့သည်။ ရွှေမှုံ နည်းနည်းလေးတော့ ပိန်သွားသည်။ အပျိုတုန်းက ကိုယ်သားကိုယ်ရေလည်း မရှိတော့။ သားသည် မအေကလည်း ဖြစ်ပြန်၊ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကျေလည်း ရှိပုံရသည်။ ရွှေမှုံသမီးကလေးကို ငဲ့ကြည့်ပြန်တော့ မှင်တင်တင်။ ကလေးက မလန်းသလိုလို နွမ်းလှသည်။ မျက်လုံး မျက်ဖန်တော့ ရွှေမှုံနှင့် အတူသား။
“သည်လိုပါပဲ ရွှေမှုံရယ်။ ညည်းတို့ အိမ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ငါလည်း ဘယ်သူ့ အိမ်မှကို မရောက်သာကြာပြီ။ ခေတ်ကာလကလည်း မကောင်းတော့ အိမ်က မခွာဝံ့ဘူး”
ရွှေမှုံက သမီးဖြစ်သူ၏ ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ မလှအုံကို အကျိုးအကြောင်း ပြောပြသည်။ ကလေးက မနက်အိပ်ရာထ တိုင်းလည်း လန်းသည်မရှိ။ နေ့ခင်းနေ့လယ် ကိုယ်ကလေးပူ ချင်တော့လည်း ပူလာသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ညနေဘက်တွင် အပူအားကြီးတတ်ပြန်သည်ဆို၏။ ကလေးဖျား၊ ကလေးနာ ယတြာမန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရွာမှာ မလှအုံက နာမည်ရသည်။ တော်ရုံတန်ရုံအဖျားတော့ မန်းရုံ၊ ယတြာလုပ်ရုံ၊ ဆေးမြီးတို ကလေးသုံးရုံနှင့် ပျောက်နိုင်လို့ ဆေးဆရာဆီ မသွားလေ့ကြ။ အခုလည်း မလှအုံကို လာမန်းခိုင်းခြင်းဖြစ်ကာ ယတြာတောင်း ခြင်းဖြစ်၏။ မလှအုံက ကလေး၏ မျက်တွင်း မျက်ဆံနှိုက် ကြည့်သည်။ ကိုယ်သားကိုယ်ရေ စမ်းကြည့်သည်။ မေး အောက်၊ ချိုင်းအောက် လက်ခုံနှင့် စမ်းသည်။
“နေတက်ဖျား၊ မွန်းတည့်ဖျား၊ သုံးဗဟိုဖျား၊ နွားရိုင်း သွင်းချိန်ဖျား၊ သူငယ်အိပ်ဆိပ်ဖျား၊ ကြက်ဦးတွန်ဖျားရယ်လို့ ရှိသယ် ရွှေမှုံရဲ့။ ညည်းကလေးက နေ့နေ့ညညဖျားသာဆိုတော့ သူငယ်နာများ မစင်ရော့သလားအေ။ ငါ မန်းသယ်ဆိုသာက အဲသလောက် စုံစီနဖာဖျားသာမျိုးတော့ မစွမ်းဘူး။ အဲသာကျ တော့ဆေးဆရာများမှဖြစ်မှာ။ ကိုင်းပါလေ ရန်ကင်းအောင် တော့ မန်းပေးလိုက်ပါ့မယ်။ ညည်းသမီး နာမည်က ဘယ်သူ”
“ကြာသပတေးသမီးပေါ့။ မအေရုပ်ပါကောအေ။ သည် မယ်၊ ငါပြောမယ်။ ကလေး ခြေသည်းလက်သည်းကို ညှပ် ကရော၊ အ၀တ်သန့်သန့်နဲ့ ထုပ်ထား။ ကြာသပတေးသမီးဆို တော့ ပုန်းမဲဇာသားကို ညည်းသမီးအရပ်နဲ့တိုင်းဖြတ်၊ ညအိပ် တော့ ဘေးမှာမြှောင်သိပ်၊ ကြားလား”
“ခုနင်က ခြေသည်းလက်သည်းထုပ်ထားသဲ့ အ၀တ်ထုပ် ကို ခြေရင်းမှာထား။ ဆန်ကို သုံးထုပ်ထုပ်အေ။ တစ်ထုပ်က ခေါင်းရင်းထား၊ တစ်ထုပ်က ခါးနားမှာထား၊ တစ်ထုပ်က ခြေရင်းမှာထား။ နောက်နေ့မိုးလင်းတော့ ခေါင်းရင်းကအထုပ် ကို ဆွမ်းချက်ပြီးလောင်း၊ ခါးကအထုပ်ကို ဆင်းရဲတဲ့လူပေး လိုက်၊ ခြေရင်းကဆန်ကိုချက်ပြီး ခွေးတို့ ကြောင်တို့ ကျွေး။ လက်သည်းခြေသည်းထုပ်ကို အိမ်အနောက်ဘက်ပစ်လိုက်။ အညံ့ကျေကရော၊ မှတ်မိလား”
မလှအုံက ကလေးခေါင်းကိုကိုင်ကာ မန်းသည်။ မအိမ် ကံကတော့ ရွှေမှုံ့သမီးကလေး မှုံနံ့သာကိုသာ သေသေချာချာ ကြည့်နေခဲ့သည်။ မလှအုံပြောသလို ရွှေမှုံနှင့်တူသလိုလို ရှိ သော်လည်း ကြီးတော်စံရွှေမျက်နှာကျ ပိန်းပိန်းရိုးရိုးရိပ်ရိပ်ပါ သည်။ မျက်တောင်စင်းစင်း၊ မအိုးမအီဆိုတော့ မျက်နှာက မပွင့်ချင်။ သူ့သမီးကို မအိမ်ကံ ကြည့်နေတာမြင်တော့ ရွှေမှုံက မအိမ်ကံ သမီးကို ဖျတ်ခနဲ သတိရသွားပုံပေါ်၏။ ကလေး ကြည့်ပါရစေ ဆိုလေသည်။
“မအိမ်ကံသမီးကို ငါ ကောင်းကောင်း မမြင်ဖူးသေး ပေါင်အေ၊ ပြစမ်းပါဦး။ ကြည့်စမ်းပါရစီ။ ညည်းသမီး ကလေးက ကံကောင်းပါသယ်အေ၊ လက်ပေါတော့ အထိန်းရ သက်သာမှာပေါ့။ ငါဖြင့် ကလေးတစ်ဖက်နဲ့ ဒေါင်ချာစိုင်း လိုက်ပုံ မပြောပါနဲ့တော့။ သည်ကြားမကျန်းမာတော့တအီအီနဲ့”
မအိမ်ကံက ကျေးဥကို လှမ်းခေါ်တော့ သမီးနှင့်အတူ ရောက်လာခဲ့သည်။ ရွှေမှုံက မအိမ်မြိုင်ကလေးကို အကဲခတ် သည်။ ပြုံးပြသည်။ ပါးကလေးကိုဖျစ်သည်။ လက်မောင်း နှစ်ဖက်ကကိုင်ရင်း ကလေးကို မ၀စတမ်းကြည့်နေခဲ့ပါ၏။ မအိမ်မြိုင်က အတင်းရုန်းသဖြင့် ကျေးဥက ကပျာကယာ ကောက်ချီရသည်။ ရွှေမှုံက ကျေးဥ ချီပိုးထားတာကိုပင် လိုက်ကြည့်နေသေးသည်။ မအိမ်ကံက ရွှေမှုံ့မှတ်ချက်ကို ကြားချင်နေသည်။ ရွှေမှုံ့မျက်နှာက တဖြည်းဖြည်း ပြုံးလာ ရာက အားရ၀မ်းသာဆို ရှာပါ၏။
“လှလိုက်သာတော် ဖအေတူ မအေတူကလေးပါလား။ နှုတ်ကောင်းတော့ နယ်စိုး၊ ရုပ်ကောင်းတော့ ပြည်စိုး။ ညည်းသမီး ညည်းလိုလာမှာပါပဲ မအိမ်ကံရယ်။ တကယ်ပြောသာ ရက်စက်ပါ့အေ”
ညည်းသမီး ညည်းလိုလာမှာတဲ့လား။ ဒါ ဘာကိုပြော တာလဲ။ ညည်းလို ရုပ်ရည်ချောလွန်းလို့ တစ်နယ်လုံးကြား ထင်ပေါ်မယ့် သမီးကလေးလို့ပြောတာလား။ ရုပ်ချောပေမယ့် ကွမ်းတောင်ကိုင်တော့ ဖြစ်မယ်မထင်ပေါင်လို့ဆိုလိုတာလား။ ကိုပြေသိမ်း သတင်းများ မကြားကောင်းမကြားရာ သိထားလို့ များလား။ ညည်းယောက်ျား စစ်မြေပြင်မှာ ကျသွားပြီဆိုမှ တော့ ညည်းသမီး ဘယ့်နှယ်လုပ် ကွမ်းတောင်ဖြစ်တော့မှာတုံး မအိမ်ကံရဲ့လို့များ သဘောရောက်ချင်တာလား။ ထင်လျှင် လည်း ခံရရုံပင်။ ကိုပြေသိမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ မအိမ်ကံ ဘာကိုမျှ မကြားရတော့ပြီ။ သေပဲသေရော့လား။ ရှင်ပဲရှင် လေသလား။ မအိမ်ကံ ကိုယ်တိုင်ပင်မသိမှတော့ သူစိမ်း ပြောတာခံရုံပင်။ အမေပန်းရုံရောက်လာတော့ ကြီးတော်စံရွှေတို့ မာကြရဲ့လား မေးသည်။ ရွှေမှုံ့သမီးကလေး တရှောင်ရှောင် ဖျားတာကို မေးသည်။ ရွှေမှုံပြန်သွားတော့ အမေပန်းရုံနှင့် မလှအုံတို့ စကားပြောရင်းကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည်။ မအိမ်ကံကတော့ ရက်ကန်းရုံဘက် ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။
ရွှေမှုံ ရောက်လာပြန်တော့ ငြိမ်နေသည့်စိတ်က လှုပ်ရပြန် သည်။ မအိမ်ကံကိုယ်တိုင်ပင် အဖေ အမေငယ်လင်ငယ်မယား မဟုတ်လို့ ကွမ်းတောင်မပိုက်ရသည့်အဖြစ်ကြုံခဲ့ရသည်။ မအိမ် ကံမှာ နှလုံးကွဲမတတ် ခံစားခဲ့ရပါ၏။ မိန်းမသားတစ်ယောက် အဖို့ ကွမ်းတောင်ကိုင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဆိုသည့်ဂုဏ်က မသေးလှ။ ရွှေမှုံကိုပဲကြည့်။ ဘယ်လိုအခြေ၊ ဘယ်လိုဘ၀ရောက်ရောက် တစ်ချိန်က ရွာကဗန်းတင်ခဲ့ရတဲ့ကွမ်းတောင်ကိုင်ပါတော် ဆို သည့် မာန်ကလေးတ၀င့်ဝင့်။ သည်ရွှေမှုံကပဲ သမီးကလေး မွေးသလို မအိမ်ကံကိုယ်တိုင်လည်း သမီးကလေး မွေးပြန်လို့ သမီးတစ်ခေတ်တစ်ပြန်ကြုံကြပြန်ပြီ။
အပိုင်း ၂ အား ၇လပိုင်း ၅ရက်နေ့မှာ တင်မှာဖြစ်ကြောင်း...................
Posted by Ree Noe Mann at 9:32:00 PM7comments:
ကျောင်းဆိုပြီး အိမ်ကထွက်လာတယ်။ ပြီးရင် ကျောင်းမရောက်ဘူး။ လမ်းမှာတင်ပျောက်ပြီးမြို့ထဲ ရောက်သွားတယ်။ မြို့ထဲရောက်တော့လည်း တွေတဲ့လူတိုင်းက ဗိုလ်မှူး သားဆိုပြီး မုန့်ဖိုးတွေပေးဆိုတော့ ပျော်နေတာပေါ့။ ကျောင်းကို မတက်ချင်တော့ဘူး။ အဖေက အဲဒီတုန်းက တက်ရင်းမှာ ဒုတိယ အကြီးဆုံးဆိုတော့ ကျောင်းကဆရာ၊ ဆရာမတွေကလည်း လုံးဝ မတိုင်ကြပါဘူး။ ဒါပင်မဲ့ သိကြတဲ့အတိုင်း ကြမ်းပေါက်တစ်ရာကို ပိတ်လို့ ရပင်မဲ့ ပါးစပ်ပေါက်တစ်ပေါက်ကို ပိတ်လို့မရပါဘူး။ သိပ်မကြာလိုက်ဘူး။ အိမ်ကသိသွားပြီး အဖေနဲ့ အမေတို့ရဲ့ ဆုံးမ စကားကို ကျနော်ရဲ့ အကျင့် အတိုင်း ခံမပြော နားမထောင်ပဲ လုပ်ခဲ့တယ်။ ကြာလာတော့ အမေရဲ့ ဒုတ်တွေကော လက်တွေကော ပါလာပါတော့တယ်။ ဒီကကောင်ကလည်း အမေရိုက်တာ လောက်တော့ ပန်းနဲ့ ပေါက်တယ်လို့ပဲ ထင်တာပေါ့။
ကျနော် ငါးတန်းနှစ်လောက်ထဲက ဆေးလိပ်ကိုသောက်တက်ခဲ့ပြီ။ ခုတော့ အရက်ပါသောက်တက်လာတယ်။ အဖေရဲ့ အရက်ပုလင်း ကို ခိုးခိုးပြီးသောက်တက်လာတယ်။ (အဖေ မသိအောင်ပေါ့)
ကံကြမ္မာ ကိုပဲ အပြစ်မတင်ချင်တော့ပါဘူး။ ကိုယ်ကိုတိုင်က မကောင်းတော့ ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကောင်းကြီးပဲ ပေါ့လေ။ ကျနော် ၈တန်းနှစ်မှာ ငှက်ဖျားဖြစ်ပြီး တစ်လကျော်လောက်ဖျားသွားတယ်။ ကျောင်းလည်းမတက်နိုင် တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ကျောင်းဆက်မတက်တော့ဘူးလို့ နေမကောင်းနေရင် ပူစာလိုက်တော့ ခွင့်ပြုမိန့်ရသွား တော့တာပေါ့။ အဲလိုနဲ့ ကျနော် ကျောင်းရှစ်တန်းနဲ့ ကျောင်းထွက်လိုက်တယ်။ အလုပ်လုပ်လာဆိုတော့လည်း လက်ကျောတင်တင် ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူး။
အဖေက တပ်မှာ ဒုတိယ အကြီးဆုံးဆိုတော့ ကျနော်မြို့ထဲသွားရင် ဟိုလူက မုန့်ဖိုးပေး၊ ဒီလူက မုန့်ဖိုးပေးနဲ့ ကျနော် သုံးစွဲတက်လာတယ်။ သုံးတက်လာတာတော့ သိပ်ကိစ္စမရှိသေးဘူး။ စွဲတက်လားတာဟာ ကျနော်ဘဝရဲ့ ဖြတ်မရတဲ့ အမဲစက်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်ချင်တဲ့ ကျနော်ရဲ့ စိတ်ကြောင့် ကျနော် ဆေးခြှောက်သုံးတက်လာပြီး နောက်ပိုင်း ဖြတ်မရတဲ့ အခြေအနေ ကိုရောက်သွားတော့တယ်။ ကျနော်အခြေအနေ ကို အဖေက မရိပ်မိပင်မဲ့ အမေကတော့သိတယ်။ အမေရဲ့ ဆုံးမမှုလဲ နားမဝင်ခဲ့ပါဘူး။
နောက်ပိုင်း အိမ်ကနေပိုက်ဆံခိုးပြီး ထွက်လာခဲ့တယ်။ ပိုက်ဆံကုန်တော့ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတော့ အဖေ နဲ့ အမေ ဆီကို မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ပြန်ဝင်ပြီး လိမ္မာချင်ယောင်ဆောင် နေလိုက် ပြန်သောင်းကျန်းလိုက်နဲ့ပေါ့။
မိဘတွေပညာ သင်ပေးရဲ့သာနဲ့ ကျောင်းနေပျင်းတဲ့ ကျနော် အသိညာဏ်ပဲ နည်းလို့လား၊ ဦးနှောက်ကပဲ မစဉ်းစားတက်လို့လာ မပြောတက်တော့ဘူး။ ကျနော် ဆေးကြောင်နေတဲ့ အချိန် အမေ ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ အချိန်နဲ့ ကြုံတော့ အမေစကားကို အဟုတ်ထင်ပြီ ကိုယ်ကိုကိုယ် ဓါးနဲ့ သွားထိုးလိုက်ပါလေရော။ နှစ်ချက် ဆင့်ထိုးလိုက်တာ။ ချက်ချင်း မလဲကျသေဘူးနော်။ ခြေလှမ်း အလှမ်း နှစ်ဆယ်လောက်မှ လဲကျသွားတာ။ အဲ့လောက်ထိ ကျနော် ဆိုးခဲ့တယ်။
အဲ့ဒီဆေးခြှောက်နဲ့ပဲ ကျနော် ထောင်ငါးနှစ်ကျဖူးလိုက်သေးတယ်။ အဖေ နာမည်၊ အမေရဲ့ မေတ္တာတွေကြောင့်ပဲ ကျနော ထောင်ထဲမှာ တစ်နှစ်ခွဲ လောက်ပဲ နေခဲ့ရတယ်။ ထောင်မှူး လွှတ်ပေးလိုက်လို့ ထောင်က ထွက်လာရတယ်။ ကျနော် ဘဝမှာ ဘာမှ မလုပ်ဖူးတာမရှိသလောက်ပဲဗျ။ နောက်ပိုင်း အဖေ နဲ့ အမေ စကားများကြရင်တောင် ကျနော် ကို ဘယ်သူမှ မယူချင်တော့ဘူးဗျ။ ညီလေး ကိုပဲ သူတို့သားလုပ်နေကျတော့တယ်။ အဖေ ကလည်း “ မင်း သားကြီး မင်းခေါ်သွား ငါ့ကို သားငယ်ပဲထားခဲ့”၊ အမေကလည်း “ရှင်လို့ အရက်သမားနဲ့ ကျမသားငယ်ကို မထားနိုင်ဘူး။ ရှင်နဲ့ အဖေါ်ရအောင် ရှင့် သားကြီး ရှင်ခေါ်ထား” အဲလို အဲလို ကျနော်က တော်တော် ဆိုးလို့ အမေ နဲ့ အဖေတောင် မလိုချင်ကြတော့ဘူးလေ။
ရွှေဓူဝံ တို့ ဝမ်းချိုင်းတို့ဆိုတာ ကြာဖူးကျမှာပေါ့။ သူတို့ လက်သီးကို အဖေကသနားတယ်ဗျ။ သူ့ တပည့်တွေကို ဆုံးမတိုင်း အဖေက လက်သီးနဲ့ အမြဲထိုးတယ်။ နှစ်ချက် မထိုးရဘူး မောက်ပြီးသာပဲ။ ကျနော် နဲ့ တွေ့မှပဲ အဖေ နည်းနည်း သိက္ခာကျသွားတယ်လေ။ ငါးချက်လောက် ဆင့်ထိုးမှ ကျနော်လဲကျတာကို။ အဖေက သားသမီးတွေအပေါ် ဘယ်တော့မှ လက်ဖျားနဲ့ ထိတာမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်ကျမှ အဖေ့ရဲ့ စစ်သား ကရင်လက်သီး ကိုမိတော့တာပေါ့ဗျာ။ ကျနော်ရဲ့ မလိမ္မာမှုတွေပေါ့ဗျာ။
ဒီလိုနဲ့ ၁၉၉၉လောက်မှာ မိန်းမ ယူလိုက်တယ်။ အလုပ်ကိုမယ်မယ်ရရ မလုပ်တဲ့ ကျနော် မိဘအိမ် ပဲရောက်လာရပြန်တာပေါ့။ မိဘကို တစက်ကလေးမှ ပြန် မကြည့်ဘူး။ ကိုယ်ထင်ရာ ကိုယ်ဆိုင်း ဆိုသလိုပဲ လုပ်ချင်ရာကိုလုပ်နေခဲ့တယ်။ ၂၀၀၂ လောက်မှာ အဖေ ဆုံးသွားတော့ အမေ က သူ့ဘက်က အမျိုးတွေရှိတဲ့ ဘားအံမှာသွားနေတယ်။ ကျနော်ကတော့ ယောက္ခမနဲ့ နေခဲ့တယ်။ မုဆိုးမ ဖြစ်နေတဲ့ အမေကို ကူညီထောက်ပံ့ဖို့ မစဉ်းစားပဲ မိန်းမကလေးမွေးဖို့ အတွက် မွေးစရိတ်သွားတောင်းလာခဲ့တယ်။ အမေဆီက ပိုက်ဆံနဲ့ ပဲ ကျနော်မိန်းမ ကို ကလေးမွေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ယောက်ကျားလေးဗျ။ ကျနော်အရမ်းချစ်တာ ကျနော်သားကို။ ဘယ်သွားသွား ကျနော် ပခုံးပေါ်မှာ အမြဲရှိတယ်။
ကျနော် တစ်ခု စဉ်းစားမိတာရှိတယ်။ ကျနော်တောင် ကျနော်သားလေးကို ဒီလောက်ချစ်တာ ကျနော် မိဘတွေဆို ကျနော်ကို ဘယ်လောက်များချစ်လိုက် ကြမလဲနော်။ ကျနော် နောက်ကျသွားခဲ့ရပြီ။ ကျနော် မိဘ စေတနာ မေတ္တာကို နားလည်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်ဟာ မိဘနဲ့ အဝေးမှာရှိတဲ့ နေရာတစ်နေရာရဲ့ ဆေးရုံးပေါ်မှာ ရောက်ရှိနေပြီလေ။ ကျနော်ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်သက်ကိုစောင့်ရင် ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ အဖေ နဲ့ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေသေးတဲ့ အမေ ကို စိတ်ကရည်မှန်းပြီ ရှိခိုးကန်တော့ လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ နောက်ဘဝမှာ လူ ပြန်ဖြစ်အုံးမယ်ဆိုရင် ဒီဘဝမှာ အဖေနဲ့ အမေ အပေါ်တင်နေတဲ့ အကြွေးတွေးကို သား ဆပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါမယ်ဗျာ။
ဖြစ်လေရာ ဘဝတိုင်းမှာ မိဘကို ဒုက္ခပေးသောသား ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်သော လူ မဖြစ်ပါရပါစေနဲ့။ လူ့ဘဝများ ထပ်ရခဲ့သည်ရှိသော မိဘ အားကိုးရသောသား၊ မိဘ စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားနိုင်သော သား ဖြစ်ရပါလို၏ အရှင်ဘုရား..............................
မှတ်ချက် ။ ။ တမလွန် နောင်တ ဇာတ်လမ်းလေးအား ကျနော် အကိုအား မှီငြမ်း၍ ရေးသားထာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၃ရက်နေ့တွင် အဖေ ဆုံးပြီး၊ ၂၀၀၇ ဇူလိုင် ၁၆ မှာ ကျနော် အကို ဆုံးသွားပါတယ်။ သူသည် ဆိုးသည် ဆိုသောငြားလည်း အမေကိုချစ်ရာတွင် ကျနော် အမေကို ချစ်တယ်ဆိုတာ သူချစ်သလောက်ကို မမှီတာပါ။ ကျနော် အကိုနှင့် ကျနော် နောက်ဆုံး တွေ့ဖူးလိုက်တဲ့ ခုနှစ်ကတော့ ၂၀၀၂ မှာ နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံးခြင်းပါ။ နောက်ပိုင်း တစ်ခါမှ မတွေ့ကျတော့ပါဘူး။ ခုချိန်ထိပဲ ဆိုပါတော့။ အကိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတွေးကြည့်လိုက်ရင်း ကျေနပ်စရာဘာမှကိုမရှိတာပါ။ ကျနော် ဘဝမှာ သူဆီက အတုယူစရာ ဘာမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပင်မဲ့ ကျနော် ရယူလိုက်တဲ့ သူ့ဆီက အရာကတော့ ကျနော် သူ့လို မဖြစ်အောင်နေမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်ချစ်ပါတယ်။ တစ်ဝမ်းထဲက အတူတူထွက်လာကျတဲ့ ညီအစ်ကို အရင်းပဲဗျာ.........
Posted by Ree Noe Mann at 6:59:00 PM 17 comments:
လူတွေက အသက်ရှင် နေထိုင်ကြတုံးကတော့ တိုးတောင်းလှတဲ့ ဒီလူ့ဘဝလေးကို ဘာလို့များအမှားတွေနဲ့ ရှင်သန်နေထိုင် နေချင်ကြ ရတာလဲနော်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့လူ၊ မိဘကို စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်လူ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဒုက္ခပေးတဲ့လူ လူတွေဟာ အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ရှိနေကြတယ်။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ကျနော်ကကော ဘယ်လို လူမျိုးလဲ...... ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တယ်။ မိဘကိုလည်း ဒုက္ခ ပေးတက်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း အမျိုးမျိုး ဒုက္ခပေးတက်တဲ့ လူ အဖြစ်ကျနော် ကိုယ် ကျနော် သက်မှတ်တယ်။
ဒီလို လူမျိုးကို ကမ္ဘာမြေကြီးက အလေးခံပြီး နှစ်သုံးဆယ်ကျော် ထမ်းထားပေးတာကိုပဲ ကျနော်က ကျေးဇူးပြန်တင်နေရပါတယ်။
ငယ်ငယ်လေးထဲက လူချစ်လူခင်ပေါတဲ့ ကျနော်ဟာ ကျနော် အဘိုးရဲ့ မြေးဦး အသည်းကျော်ပေါ့ဗျာ။ အဘိုး ဘယ်သွားသွား ကျနော် ပါတယ်။ အဲလောက်ကိုချစ်တာ။ ဪ မေ့နေတာ။ ကျနော်ကို ကျနော် မိတ်ဆက်ပေးရအုံးမယ်။ ကျနော်နာမည်က စိုးညွှန့်ဝင်းပါ။ တမလွန်နောင်တ ရဲ့ ဇာတ်ကောင် ဆိုရင်လည်း မမှားဘူးပေါ့။
မွေးကတည်းက အဘိုးနဲ့ အဖွားရဲ့ လက်ပေါ်မှာပဲ နေလာရတော့ အဘိုး နဲ့ အဖွား ကို အဖေ နဲ့ အမေ ခေါ်ပြီး အဖေနဲ့ အမေ့ကို ကျတော့ အကိုနဲ့ အမ လို့ပဲခေါ်တယ်။ (အညာက ဓလေ့ကို အားကျလို့ ထင်ပါရဲ့ဗျာ) နောက်ပိုင်း အဘိုးလည်းဆုံး အဖေလည်း တပ်ပြောင်းလိုက်တော့မှပဲ အဖေနဲ့ အမေ ကို အဖေ အမေ လို့ ပြန်ခေါ်တာဗျ။ ကဲ ဘယ်လောက်တောင်များလဲနော်။
ကျနော်က အင်္ဂါသား။ ခံမပြော နားမထောင်တဲ့ အမေက အမြဲပြောတယ်။ ပြောလိုက်ရင် ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ နဲ့ ပြီးရင် လုပ်ချင်ရာ လုပ်တော့တာကိုဗျ။ ကျနော်ရဲ့ ပင်ကိုစိတ်ကလည်း အဲဒီ အတိုင်းပဲ။ တစ်ချို့ အင်္ဂါသား တွေလိမ္မာတာ တွေရှိကြပါတယ်။ ကျနော့ ကြမှပဲ။
ကျနော် သုံးနှစ်သားမှာ အဖေနဲ့ အမေက ကျနော် ကို အဖေါ် ရအောင်ညီမလေးမွေးပေးခဲ့တယ်။ ကောင်းကောင်းတောင် မချစ်လိုက်ရပါဘူးဗျာ။ ညီမလေးသုံးနှစ်အရွယ် မှာပဲဆုံးသွားတယ်။ သိပ်တော့ မကြာလိုက်ဘူး။ ညီးလေးတစ်ယောက် ထပ်ရတယ်။ ကျနော် ညီလေးကို ကျနော် သိပ်ချစ်တာဗျ။ ညီလေးက အနေအေးတယ်။ ကျနော်နဲ့တော့ ကွာပါ့ဗျာ။ ကျနော်က စကားများလို့လာမသိဘူး ကောင်းမလေးတွေက ကျနော်ကို သိပ်ကြိုက်တာဗျ။ ( ဟဲ ဟဲ ကိုယ့်ကို ကိုယ် ကြွားနေရတာလည်း ရှက်ပါတယ်ဗျာ)
ကျနော်တို့ ညီအကိုနှစ်ယောက် အပြင် အတူတူသွားရင် ဦးကံစိန်ရဲ့ သားတွေမှန်း မသိတဲ့ လူတွေက ကျနော်တို့ ညီအကို ကို ညီအကိုလို့ကို မထင်ကြဘူးဗျ။ ကျနော် ညီလေးက ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေ။ တရုတ် ပေါက်စလေးအတိုင်းပဲ။ ကျနော်ကတော့ ဟဲ ဟဲ အိန္ဒိယ မင်းသား ရှရွတ်စ်ခန် လို့ပြောကြတယ်ဗျ။ အသားအရောင် တူတာလောက်တော့ လက်ခံချင်ပါတယ်။ ရူပါကတော့ ကျနော်က ပိုသာမယ်ထင်တယ်ဗျ။ ကဲ ကဲ ကြွားနေရင် ကြွားလို့ ကုန်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။
ဒီလိုဗျ ကျနော်က ကျောင်းနေရတာ အရမ်းပျင်းတာ။ အပေါင်းအသင်း ခုံမင်တယ်ဆိုပါတော့။ ဒါ ကျနော်ကိုယ် ကျနော် ဒုက္ခပေးခြင်းအစပေါ့။ အိမ်က အဖေနဲ့ အမေ့ ကိုကြောက်လို့ သာ ၇ တန်းအောင်လို့ ၈တန်းရောက်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ ၈ တန်းနှစ်က အစိုးရစစ်ဗျ။ စာကျက်နိုင်မှ ရတာကို။ ကျနော်ကလည်း စာကျက်ရမှာ အရမ်းပြင်းတဲ့ အကောင် ဆိုတော့ဒီ ၈တန်းမှာ စတွေ့တော့တာပေါ့ ။ ဆရာမက နောက်နေ့စာမေးမယ် ဆိုလိုကတော့ စိုးညွှန့်ဝင်းတို့ ကျောင်းပြေးတဲ့ရက်ပဲ။
အပိုင်း - ၂ အား ဆက်လက် စောင့်မျှော်ပေးပါရန်။
သူ့နေရာနဲ့ သူလည်း လိုက်ဖက်နေပါတယ်
ကဗျာ လေးထဲကအတိုင်း ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅ လောက်က တိုင်တည်ဖူးပါတယ်။ ၂၀၀၄ ၊ ၂၀၀၅ လောက်က ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေး ပါ။ ပြန်လည် ခံစား တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Posted by Ree Noe Mann at 8:07:00 AM9comments:
Posted by Ree Noe Mann at 12:20:00 AM6comments:
ငါ့ဘဝ ထဲက ဒီနေ့
မှတ်ချက်။ ။ ဘာအတွက်မှ မဟုတ်ပါ။ စာရေးချင်လို့ ကောက်ရွတ်လိုက်တာ ထွက်လာတဲ့ စကားများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရတာ အဆင်မပြေတာများ ဖြစ်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ ဓာတ်ပုံအား Google မှယူထားပါတယ်။
Posted by Ree Noe Mann at 7:50:00 AM 14 comments:
ဆရာမ ခင်ခင်ထူးရေးသားသော် မအိမ်ကံဝတ္ထုရှည် အား ဒီဇွန်လအတွက် ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်လများမှာလဲ ဆက်လက်ဖေါ်ပြပေးနေပါမည် အကြောင်း ပြောကြားရင်း ဒီဇာတ်လမ်းလေး စဖေါ်ပြကတည်းက ကျနော် ရေးသားသော် ဇာတ်လမ်း မဟုတ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယခုတစ်ခါ ပြန်လည်၍ ထပ်ဝန်ခံပါတယ်။ ကျနော်နှစ်သက်သော ဆရာမ ခင်ခင်ထူးရေးသားတဲ့ ဒီ မအိမ်ကံ ဇာတ်လမ်းလေးအား ကျနော်မောင်နှမများ အား ပြန်လည်ဝေမျှ ခံစားတင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း...........
အပိုင်း (ရ) မှ အဆက်.........
"မအိမ်ကံကတော့ ကိုပြေသိမ်း ထွက်သွားသဲ့နေ့ ကတည်းက မေတ္တာပို့သယ်။ ကိုယ့်လင်သား ဆိုတော့ စိတ်လည်း ရောက်သယ်။ သမီးကလေး အိပ်နေသာ မြင်ရရင် ပိုတောင် သတိရမိပါရဲ့ ရှင်တို့ရယ်။ ညကြီးသန်းခေါင်တောင် ချိုးချိုး ချောက်ချောက် အသံကြားရင် ကိုပြေသိမ်း ပြန်လာ သာများလားလို့ ထကြည့်မိသယ်။ ဒါပေသိ သူထွက်သွား ကတည်းက မအိမ်ကံ နေတတ်အောင် နေခဲ့သယ်။ ဘယ်သူက မေးမေး အမျှ ဝေထားပြီးပြီလို့ပဲ ပြောသယ်။ တိုင်းပြည် အတွက် တစ်နေရာရာမှာ သူကျတယ် ဆိုရင်လည်း မအိမ်ကံ ဖြေနိုင်ပါရဲ့။ ကျွန်မလင်သား အဖြစ်သူ ကျဆုံးသွားတယ် ဆိုရင်လည်း ကျွန်မ ဖြေနိုင်အောင် ဖြေမယ့် သူပါ။ ကျွန်မ သမီးကလေး အတွက်တော့ ဖအေ ဖြစ်သူမဲ့ သွားသဲ့ အဖြစ်ကို ကျွန်မ ရင်မဆိုင်ရဲဘူး။ ကျွန်မလေ ကျွန်မ..."
ပြောရင်းက စကားတွေ တစ်ဆို့ သွားပြီး တစ်ချိန်လုံး တင်းဆယ် ထားသမျှ မျက်ရည်တာရိုး ကျိုးပေါက်သွားတော့သည်။ ထိုင်နေကြသူတွေ အားလုံး မအိမ်ကံကို ၀ိုင်းကြည့် နေခဲ့ကြသည်။ မအိမ်ကံ ဘာတွေ ပြောချင်တာလဲ။ မအိမ်ကံက စကားကို ဆက်ပြောသည်။
"စစ်ဆိုသာကြီး ဖြစ်လာမှတော့ လင်သေ သားဆုံး ဒုက္ခတွေ များကြရောပေါ့ရှင်။ သည်အဖြစ်ထဲ မအိမ်ကံ ပါနေရင် တော့လည်း အရင်းလည်း ထမ်း၊ အဖျားလည်းထမ်း ထမ်းရုံ ရှိတော့သာပေါ့။ မအိမ်ကံ ခံဝံ့သဲ့ သတ္တိရှိပါသယ်တော်"
ကိုဘဆန်းကတော့ ဒန်မီးခတ်ကိုပဲ စူးစူး စိုက်စိုက် ကြည့်နေလေသည်။ ကိုဝေဠုက မျက်လွှာကို ချထားသည်။ အမေပန်းရုံနှင့် မလှအုံက မအိမ်ကံ မျက်ရည်ကျတာကို ကြည့်ပြီး အင်္ကျီလက်မောင်းဖြင့် ကိုယ့်မျက်ရည် ကိုယ်တို့ ကြသည်။ စကားဝိုင်းက တစ်ဖန်ငြိမ်သက် သွားပြန်ပါ၏။
မအိမ်ကံ စိတ်တွေကတော့ စကားဝိုင်းမှာ မရှိ။ ရှေးဖြစ် နောက်ကြောင်းတွေကိုသာ စိတ်ရောက် နေခဲ့သည်။ တစ်သက်လုံး ရွှေလိုဥကာ နေလာခဲ့ပြီးမှ ကွမ်းတောင်ကိုင် မဖြစ်ခဲ့ရသော သူမဘ၀ ပုံရိပ်ဟောင်းများ...။
သူတကာတွေ ပြန်လာကြပြီ ကိုပြေသိမ်းရေ...၊ တော် ဘယ်မှာလဲ...။
ထိုနေ့က မအိမ်ကံတို့ အိမ်ဝိုင်းထဲမှာ ခတ္တာပန်းတွေ၊ လေးကျွန်းစကြာပန်းတွေ ဖွေးဖွေး လှုပ်လှုပ် ဖူးပွင့်နေကြသည်။ ပုန်းညက်ပင်အိုကြီးကလည်း ပုလဲခိုင်ပန်းတွေ တွဲရရွဲစီနေဆဲ။ အိမ်ထောင့်က ယင်းမာပင်ကြီးကလည်း အဖူးအခိုင်တွေ ထိုးထွက်နေကြသည်။ ပန်းတွေ ပွင့်နေတာမြင်တော့ အပျိုဘ၀ကို မအိမ်ကံ သတိရမိပါ၏။ ငယ်ကတည်းက ပန်းအလွန် ကြိုက်ခဲ့သော မအိမ်ကံသည် မနက်မိုးလင်းသည်နှင့် သနပ်ခါးပန်းမန် တဝေေ၀ဖြင့် လှချင်ရက် စက်စက် ယိုခဲ့သည်။ တစ်နယ်လုံးက မအိမ်ကံ၏ အလှကို ရင်သပ် ရှုမောရှိခဲ့ ကြသည်။ အခုတော့လည်း အပျိုလို မနေမိလို့ ကိုယ်ရိတယ် လေး ဆိုသလိုဖြစ်ခဲ့ရသည်။ အလှအပထက် ဘ၀ကို ဦးစား ပေးခဲ့ရပြီ။
အခါပျက် အတွင်းက ဓားပြသုံးကြိမ် အတိုက် ခံခဲ့ရသည်။ စစ်ဖြစ်နေသည့် အတွင်း လုပ်ငန်းတွေ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ ပြန်လည် ထူမတ်နိုင်ဖို့ အတော် အားယူခဲ့ရပါ၏။ ကျောက်ထည် ကလေးတွေကို သမီးကလေး မအိမ်မြိုင် အတွက် နတ်ကိုးကြတ်သလို သိမ်းဆည်း ထားခဲ့ပြီး ရွှေထည်အချို့ ရောင်းချခဲ့သည်။ မအိမ်ကံမှာ မိသားစုအတွက် သာမက ကိုဖိုးငွေ၊ မလှအုံတို့ တစ်ပြုံကြီးနှင့် အရီးကြာညွန့်၊ ကျေးဥတို့တစ်တွေ အတွက်ပါ တာဝန်ယူခဲ့ရသည်။ စစ်အတွင်းက မိဘနှစ်ပါး ဆုံးပါး သွားရှာသော ယောက်မဖြစ်သူ မမစိမ်းမြတို့ ညီအစ်မ၏ စားဝတ်နေရေးကလည်း မအိမ်ကံ ခေါင်းပေါ် ပုံကျလာခဲ့သည်။ တစ်ချိန်က ပေးခဲ့ကမ်းခဲ့ ရှိခဲ့ရသော ဆွေဆွေမျိုးမျိုးတွေကလည်း လက်ဖြန့်ခံ လာတော့လည်း မျှတပေးကမ်း ရပြန်သည်။ ဥစ္စာပစ္စည်း အတွက် အလို လောဘ မရှိလှသော်လည်း တာဝန်တွေက မအိမ်ကံအပေါ် အလိုလို ပိကျ လာခဲ့ပါ၏။ ရှေ့က ဦးဆောင်မည့်သူ မရှိသော်လည်း မအိမ်ကံအတွက် နောက်လိုက် ကောင်းတွေ ရှိနေတာကိုပဲ ၀မ်းသာရသည်။ မအိမ်ကံမှာ ရှေ့ဆုံးက လမ်းဖောက် ရသော ပုရွက်ဆိတ်လိုပင် နောက်က တသီတတန်းကြီး ကပ်ပါနေကြပါ၏။
ပထမဆုံး ရက်ကန်းရုံ ကလေးကို ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ထူထောင် ရသည်။ ကုန်ကြမ်းတွေ ၀ယ်လှောင်ပြီး ရက်ကန်းသားတွေကို ငွေကြို ပေးထား လိုက်သည်။ အရီးကြာညွန့်နှင့် အတူ မအိမ်ကံ ကိုယ်တိုင် လုံ့လ ၀ီရိယ စိုက်ခဲ့သည်။ သမီးကလေးကိုပင် ကျေးဥလက်ထဲ ထိုးအပ် ထားရတော့သည်။ မလှအုံခမျာလည်း အသက်အရွယ် ကြီးလာသည့်တိုင် အိုး သူကြီးရာထူးက မဆင်းရသေး။ အမေပန်းရုံကတော့ လင့်ဝတ္တရားတွေ ကင်းပြီမို့ အေးအေး သက်သာစွာ စိပ်ပုတီးကလေး တချောက်ချောက် စိတ်လျက်ရှိပါ၏။
"+++ တို့အိမ်တောင်က ချဉ်ပေါင်ခင်း+++ ယုန်ဖို ယုန်မ ဆင်းပါ လို့လေး +++ ဟဲ့ +++ ကရို့ +++ ယုန် +++ ကရို့ +++ ယုန် +++ သည်မယ်မွေးသဲ့ ခွေးကြန်စုံ +++ ဇိအထက်ကဇက်ကိုငုံ +++ ရွှေယုန်ထွန့်ထွန့်လူးပါလို့လေး +++"
ကျေးဥ တစ်ယောက် သမီး မအိမ်မြိုင်ကို မြှူနေသော သီချင်းကြောင့် မအိမ်ကံ ပြုံးမိရသည်။ သမီးကလည်း ကျေးဥ လုပ်ပြတာကို ကြည့်ရင်း ခိုးခိုးခစ်ခစ် ရယ်လေသည်။ သမီးကလေးကို လှမ်းကြည့်ရင်း နမ်းချင်စိတ် ပေါ်မိသဖြင့် ရက်ကန်းရုံထဲက မအိမ်ကံ ပြေးထွက်လာခဲ့သည်။
၀ိုင်းဝဆီက မအိမ်ကံကို ခေါ်သံ ကြားလိုက်ရသည်။ မအိမ်ကံ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ရိုးရိုးရိပ်ရိပ်။ အသံက မိန်းမသံ။ ရွာထဲက တစ်ယောက်ယောက် ထင်ပါရဲ့။ မအိမ်ကံ ၀ိုင်းဝကို လျှောက်သွားပြီး တံခါးတစ်ချပ် လှပ်လိုက်သည်။ မအိမ်ကံ မမျှော်လင့်သော၊ ဘယ်သော အခါမှ မတွေ့ချင် မဆုံချင်သော မိန်းမ တစ်ယောက်။ စောစောက ကြည်နူးခဲ့ရသော စိတ်ကလေးပင် နောက်ကျိ သွားခဲ့သည်။ ၀ိုင်းပေါက်ဝမှာ ရပ်နေသူသည် မအိမ်ကံ အိမ်ရှေ့ကို ရောက်လာ လိမ့်မည်ဟု ထင်မထားခဲ့သူပင်။ လက်တစ်ဖက်က ကလေးကို ဆွဲထားရင်း မအိမ်ကံကို ပြုံးပြနေသည်။ မအိမ်ကံကတော့ ပြန်မပြုံး ဖြစ်ခဲ့။ နှုတ်တော့ ဆက်လိုက်သည်။
"အလို... ရွှေမှုံ ဘယ့်နှယ် မလာစဖူး"
မအိမ်ကံ၏ အသံက အလိုမကျခြင်းဖြင့် တုန်ရီနေလေသည်။
Posted by Ree Noe Mann at 11:30:00 PM6comments:
Posted by Ree Noe Mann at 12:10:00 PM 13 comments:
Posted by Ree Noe Mann at 6:00:00 PM 13 comments:
ဘာစားချင်မှန်း မသိတာနဲ့ ကြာဇံကြော်စားလိုက်တယ်။ ကိုယ်ကစားတော့လည်း မောင်နှမတွေကို သတိရပြန်ရော။ ဒါကြောင့် မသိသူ ကျော်သွား သိသူဖေါ် စားခွင့် ပြုလိုက်တယ်။ ကြိုက်တက်ရင်း မြိန်စရာကြီးပါဗျာ။
Posted by Ree Noe Mann at 1:50:00 PM7comments:
အမေရိကန် Idol ဒုတိယဆုရ အဒမ်လန်းဘာ့ သည် Rolling Stone မဂ္ဂဇင်းအတွက် မျက်နှာဖုံးကာဗာ ရိုက်ကူးစဉ်က သူ၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် သူ၏ အမေရိကန် Idol အတွေ့အကြုံများအား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အသက်၂၇ နှစ်ရှိ အမေရိကန် San Deigo မှ လမ်းဘာ့ သည် ထိုအင်တာဗျူးတွင် သူသည် gay ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၄င်းအတွက် တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ အံ့အားသင့်စရာမဖြစ်သင့်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ "ကျွန်တော်၊ ကျွန်တော့်ရဲ့  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကို ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ အဲဒါက ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့  တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲ" လို့ လမ်းဘာ့က ပြောဆိုပါတယ်။
ယခင်လ အမေရိကန် Idol နောက်ဆုံး အဆင့်ပြိုင်ပွဲဝင်များ တည်းခိုနေထိုင်ရာ Bel-Air စံအိမ်တွင် လမ်းဘာ့သည် Idol ပထမဆုရ ခရစ် အယ်လ်လန် နှင့် တခန်းတည်း တည်းခိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ "သူတို့ကျွန်တော့်ကို အဲဒီ ကောင်လေးချောချောနဲ့ တစ်ခန်းတည်းထားပေးကြတယ်၊ ကျွန်တော်ကလည်း Idol ရှိုးတစ်ခုလုံးမှာ အဲဒီကောင်လေးပဲ ချောတယ်ထင်တာ၊ သူကပွင့်လင်းတယ်၊ ဖြောင့်မတ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ . . . သူ့မှာက မိန်းမရှိတယ်" လို့ လမ်းဘာ့ကပြောဆိုပါတယ်။ ထိုသို့ Rolling Stone မဂ္ဂဇင်းအားပြောဆိုပါတယ်။ မတ်လ တွင်လည်း လမ်းဘာ့နှင့် သူ၏ (သူမ၏ ?) ex-boyfriend တို့ နမ်းနေကြပုံများ အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပျံ့ နှံ့ ခဲ့ပါတယ်။
"အမေရိကန် Idol ကို သွားပြိုင်မယ်ဆိုတုန်းက ကျွန်တော်ထင်တာက အဆင်ပြေမယ်ထင်တာပါ၊ လူတွေကလည်း အဲဒီအချက်ကို ပြောဆိုကြမယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ ကျွန်တော် Los Angeles မှာ gay ဘ၀နဲ့ ရှစ်နှစ်နေလာခဲ့ပါတယ်။ ကလပ်တွေမှာလည်းကျွန်တော့်ခြေရာတွေပါပဲ။" လို့လဲ ပြောဆိုပါတယ်။ လမ်းဘာ့ကပြောဆိုရာမှာ သူ ယခုကဲ့သို့ လူထုကို gay ဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ပြောဆိုမှုဟာ သူ၏ သီချင်းသီဆိုမှုမှာ ထိခိုက်လာ မှာကို သူ စိုးရိမ်နေကြောင်း၊ ထို့အတွက်ကြောင့်လည်း ရှိုးများတွင် လည်း သူ၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းများကို မတုန့်ပြန်ခဲ့ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ "ကျွန်တော်က အနုပညာသမားတစ်ယောက်ပါ၊ ကျွန်တော် က ကျွန်တော်ပါ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့  ပြင်ပလူနေမှုပုံစံနဲ့ ကျွန်တော့် သီဆိုမှု အနုပညာ က သက်သက်စီပါ၊ ကျွန်တော့်လူနေမှုပုံစံကြောင့် အနုပညာဘက်မှာ ထိခိုက်မှုမရှိသင့်ဘူး" ဟု လမ်းဘာ့ကဆိုပါတယ်။ "gay တွေရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအတွက် ကျွန်တော့်ဓာတ်ပုံကို အသုံးချမှာကို ကျွန်တော်စိတ်မ၀င်စားပါဘူး၊ ကျွန်တော်က အဆိုတော်ပဲဖြစ်ချင်တာပါ၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်မဖြစ်ချင်ပါဘူး။" ဟု ပြောဆိုပါတယ်။
ကိုစိုင်းထွန်း ဆိုဒ်လေးမှ ပြန်လည် ဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
Posted by Ree Noe Mann at 8:25:00 PM 10 comments:
ဒီနေ့မှ လူလည်း လန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိလာခဲ့တယ်။ နေမကောင်း ဖြစ်တာရှားတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်ပဲ ကြာကြာဖျားဖူး တော့တယ်။ စိုးရိမ်လို့ သတင်းလာမေးကျတဲ့ မောင်နှမတွေ၊ phone messageနဲ့ လှမ်းမေးတဲ့ မောင်နှမတွေကော၊ မသိချင်ကော သိချင်ကောဆောင်သွားကြတဲ့ မောင်နှမတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီ နေမကောင်းတုန်းလေး လေးငါးရက်မှာ ဘလောက်လောကကြီး ဘာတွေဖြစ်လို့ ဘာတွေဖြစ်မှန်းကို မပြောပြတက်တော့ အောင်ပါပဲ။ အဓိက ကတော့ စိတ်ဓာတ်တွေကျနေကြတာပေါ့။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပဲဆိုပါတော့လေ။ အဲဒီအထဲမှာ ကျနော်က ရှေ့ဆုံးကလို့ ပြောကြပါလိမ့်အုံးမယ်။ စိတ်ကျနေတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးကို ကျနော်က ဒီနေရာကနေ “ ကျနော် ပြန်လည်နိုးထ လှုပ်ရှား ” လာပါပြီလို့ ကြွေးကြော်ရင်း ပို့စ်အသစ်လေးတွေ ဆက်လက်တင်နေပါတော့မယ်ဗျာ။
ဒါကြောင့် ကျနော့် မောင်နှမ ညီအစ်ကို သူငယ်ချင်း အားလုံးကို ကျနော်နဲ့ အတူတူ ပြန်လည် နိုးထတက်ကြွစွာနဲ့ ဘလော့ဂ်လောကကြီး ကို အသက်သွင်းကြပါဆို့လို့ ..............................ပြောကြားရင် လိုအပ်တာများကို မှာစားနေပါတယ်ဗျာ။
Posted by Ree Noe Mann at 1:30:00 AM 15 comments:
Posted by Ree Noe Mann at 10:20:00 PM3comments:
Posted by Ree Noe Mann at 10:15:00 AM7comments:
ကျနော့် မောင်နှမ များအား ကြည့်စေချင်လို့ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။ ကြည့်ပြီးရင် ဘယ်လိုထင်လဲ ဆိုတာကိုပါ ပြောခဲ့ကြပါအုံးနော်။ ဒါအမှန် တကယ်ပါ။
Posted by Ree Noe Mann at 8:37:00 PM 31 comments:
ဒီနေ့ဟာ အဖေများနေ့ဖြစ်ပါတရ်။ သားသမီးတိုင်းကို မေးကြည့်ပါ။ ဘယ်သူကိုပိုချစ်လဲလို့ မေးရင် အမေ့ကို ပိုချစ်တရ်လို့ ဖြေမှာက ၈၀ရာခိုင်းနှုန်းလောက်ရှိပါတရ်။ ဒီ ၈၀ရာခိုင်းနှုန်းထဲမှာ မသိမသာပါသွားတာက တော့ ကျနော်တို့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော အဖေပါပဲ။ အဖေကိုမချစ်ဘူးလို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ အဖေကို မချစ်ဘူးလို့ပြောရင် ဝဇီကံထိုက်ပါတရ်။ အဖေက ကျနော်တိုကို သူ့ အသွေးအသားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက် ထားတာဆိုရင်လည်း မှားတဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဖေမရှိပဲ ကျနော်တို့ဆိုတာ ဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းကို မရှိတာပါ။ ဒါကြောင့် အဖေကို သတိရသောအားဖြင့်၎င်း ၊ ချစ်သောအားဖြင့်၎င်း အဖေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ဒီနေ့ အဖေများနေ့မှာ အမှတ်တရရေးသား ဖေါ်ပြလိုက်ရပါတရ်။
ကျနော် သူငယ်တန်းနှစ်မှာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်လို့ ဆေးရုံးတင်ရပါတရ်။ ဆေရုံးမှာ အမေပဲလိုက် စောင့်နိုင်ပါတရ်။ ဆေရုံးတင်ပြီး နှစ်ရက်လောက်မှ အဖေရောက်လာပါတယ်။ အဖေမှာ အလုပ်တာဝန်တစ်ဖက်နဲ့ ဆိုတာကို နားမလည်တဲ့ သား က အခန်းထဲ ဝင်လာတဲ့ အဖေကို “ ခုထွက်သွား လုံးဝ မလာနဲ့ ” လို့မောင်းထုတ်ခဲ့ဖူးပါတရ်။ အဖေလည်း ကျနော်စိတ်ချမ်းသာအောင်ဆိုပြီး အခန်းအပြင်ကို လှည့်အထွက်မှာတော့ ကျနော် ဆေးရုံးကုတင်ပေါ်မှာ ချုံပွဲချ ငိုတော့တာပါပဲဗျာ။ ဒါအဖေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခုချိန်ထိ မှတ်မိနေသေးတဲ့ အကြောင်းအရာ ပထမတစ်ခုပါ။
ကျနော် ၂ တန်းနှစ်မှာ ကျောင်းကအပြန်ကို အဖေကလာကြိုပါတရ်။ အိမ်ရောက်ခါးနီးမှာ မိုးအရမ်ရွာလိုက်တော့ ကျနော်တို့သားအဖနှစ်ယောက် မိုးရေစိုစိုနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်ခဲပါတယ်။ အိမ်ရောက်ပင်မဲ့လည်း မိုးကမတိတ် သေးတော့ ကျနော်က အဖေကို ဘောလုံးကန်မယ်လို့ ပြောတော့ အဖေက လည်း ကန်မယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ မိုးရေထဲမှာ ဘောလုံးကန်ပြီးလို့အိမ်ပေါ်ပြန်အတက်မှာ အဖေက ကျနော်ကို “ သားငယ် ....သားငယ်ဘောလုံး မကန်တက်ဘူး နောက်မကန်နဲ့တော့ ” တဲ့ အဖေပြောတဲ့ စကားကိုနားထောင်လာတာ ခုချိန်ထိပဲ ကျနော် ဘောလုံးမကန်တက်ဘူး။ ကန်ဖို့လည်း စဉ်းစားတိုင်းလည်း အဖေပြောတာကိုကြားယောင်နေမိတရ်။
ကျနော်က ကရင်စပ်တယ်။ အဖေက ကရင် အမေက ဗမာ။ အဖေအရက်သောက်ပြီးဆိုရင် သွေးအရမ်းဆိုးတယ်။ အိမ်မှာ ရှိသမျှလူအားလုံးနေစရာမရှိအောင်ကို သွေးဆိုးပါတယ်။ မြွေဆိပ်ဖြေးဆေးကို မြွေဆီကပဲပြန်ယူရသလို အဖေရဲ့ ကရင်သွေးဆိုးကိုလည်း ကရင်သွေးနဲ့ပဲ ပြန်ငြိမ်ရပါတယ်။ အဖေ့ သွေးဆိုးကို ညိမ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ ကရင်သွေးကတော့ ကျနော်ပါပဲ။ တစ်အိမ်လုံးမှာ အဖေကို တစ်ခွန်းတည်းနဲ့ ပြောလို့ ပြီးတာဆိုလို့ ကျနော်တစ်ယောက်ထဲ ရှိပါတရ်။ ( အဲဒီလောက်အောင် အဖေက ကျနော် သိပ်ချစ်ပါတရ်)
အဖေကို နာမည်ပျက်အောင်လုပ်ဖူးသလို (တစ်ခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုလ်ကြီးကံစိန် သားပေါ့ ဘာဖြစ်တရ် ညာဖြစ်တရ် ဆိုပြီးပြောကျတော့ နေရင်းထိုင်ရင်း နဲ့ အဖေနာမည်ပျက်ရတာပါ။ အမှန်က အစားမတော်တော့ တစ်လုတ်၊ အသွားမတော်တော့ တလှမ်း ဆိုသလို ကျနော်ကြောင့်ပါ) သွေးထွက်သံယို ဖြစ်အောင်လည်း လုပ်ဖူးပါတယ်။ အဇာတသတ်လို ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တာမျိုးမဟုတ်ရပါဘူး။ မတော်တဆ ကျနော်ကြောင့် ဖြစ်သွားရတာပါ။ ကျနော်မှတ်မိနေသေးတရ်။ အဖေက အရက်သောက်ထားတော့ ကျနော်က အဖေကို အိပ်ဖို့ ပြောတရ်။ အဖေကလည်း အိပ်မယ်ပြောတရ်။ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း အဖေကို အခန်းထဲ လိုက်ပို့ပြီး အခန်းတံခါးကို ပြန်အပိတ်မှာ....... အဖေ လက်က တံခါးကိုကိုင်ထားမှန်း ကျနော် မသိလိုက်ဘူးဗျာ။ အဖေရဲ့ အော်သံကြားမှပဲ ကျနော် ကြည့်မိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အဖေလက်မှာ သွေးတွေပန်းထွက်နေပြီဗျ။ ကျနော် အဖေကိုကြည့်ပြီး သနားလိုက်တာဗျာ။ ကျနော်လည်းဘာမှမလုပ်တက်တော့ ထိုင်ငိုတော့တာပေါ့။ အဖေက ကျနော်ကို တစ်စက်ကလေးမှ စိတ်မဆိုးဘူးဗျာ။ အနားကြပ်သွားတော့ အမာရွတ်ကျန်ခဲ့တယ်။ အမာရွတ်ကိုကြည့်ပြီး အဖေက ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ “ သားငယ်လေး ပေးတဲ့ အမှတ်တရတဲ့ ” ဗျ။ ကျနော်ရင်ထဲမှာ ခုချိန်ထိ နာကျင်နေတုံးပဲ။
ကျနော် လိုချင်တာရှိလို့ အမေကိုပြောရင် အမေကတော့ အိမ်ရှင်မဆိုတော့ ချင့်ချိန်ပြီးမှ လုပ်သင်တရ်ထင်မှ လုပ်ပေးတာ၊ ဝယ်ပေးတာပါ။ အဖေကတော့ ကျနော် ဘာလိုချင်လဲ နေ့မကူးစေရပါဘူး။ချက်ချင်းကို လုပ်ပေးတော့တာပါ။ အဖေ အရက်သောက်တာမှန်ပါတယ်။ ဒါပင်မဲ့ ကျနော်ဝယ်ပေးတဲ့ အရက်ဆိုရင် အဖေလုံးဝမသောက်ပါဘူး။ ဝယ်ပေးဖို့ လူမရှိခဲ့ရင်တောင် ကျနော်ကို လုံးဝ မဝယ်ခိုင်းခဲ့ပါဘူး။ သူကိုယ်တိုင်သွားဝယ်ပါတယ်။ ကျနော် မဝယ်ပေးဖူးဘူးလို့ မပြောပါဘူး။ ကျနော်ဝယ်ပေးဖူးပါတယ်( အမေနဲ့ ပေါင်းပြီ)။ ဒါပင်မဲ့ အဖေ ကို အသိမပေးခဲ့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ကျနော် ၁၀တန်းအောင်တော့ ရန်ကုန်သွားပြီ အလုပ်သွားလုပ်မယ်ပြောတော့ အဖေက “ ငါ မသေမချင်း သားငယ် အလုပ်လုပ်ဖို့ စိတ်မကူးနဲ့ ။ ငါရှာကျွေးနိုင်တရ်တဲ့ ” ဒါပင်မဲ့ ကျနော် နားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျနော် လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေချင်လာပြီလေ။ ဒါကြောင့်လည်း အဖေဆေးရုံးသွား တက်နေတုံး အချိန်မှာ ကျနော် အမေကိုပြောပြီး ရန်ကုန်ကိုထွက်လာခဲ့တာပါ။
အဖေကြောင့် ကျနော် ရန်ကုန်မှာ အလုပ်ရှာစရာမလိုပဲ အလွယ်တကူရရှိခဲ့တာပါ။ အဖေရဲ့ အသွေးအသားတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဒီမျက်နှာကြောင့် လူချစ်လူခင်ပေါများခဲ့တာပါ။ အဖေကြောင့် ကျနော် လူပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးခွင့် ရခဲ့တာပါ။ အဖေကြောင့် လူတွေရဲ့ စိတ်ကိုနားလည်နိုင်ခဲ့တာပါ။ အဖေကြောင့်ပဲ ဒီလောကကြီး မှာ အသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။ နောက်ဆုံး အဖေမရှိတော့ပင်မဲ့ ကျနော်အားဆက်လက် ရှင်သန်ဖို့အတွက်ခွန်အားတွေပေးရင်.........................
အဖေများနေ့အားဂုဏ်ပြုရင်း အဖေနဲ့ ကျနောရဲ့ အမှတ်တရ တစ်ချို့အား ဖေါ်ပြလိုက်ရပါတရ်။
Posted by Ree Noe Mann at 1:30:00 AM 24 comments:
ကိုလူထွေးရေးတဲ့ ဘဏ်မန်နေဂျာ ကိုသာထွေးကို သဘောကျလို့ ကျနော်ဆီမှာ ရောက်လာတဲ့ Forward mail ထဲမှ ရသော ဒီပုံပြင်လေး အား ကျနော့် မောင်နှမ များ အာလုံးပျော်ရွှင် နိုင်စေရန် ဖေါ်ပြလိုက်ရပါတရ်။
ဖခင်။ ။ ဥက္ကဌ ကြီးခင်ဗျား... လစ်လပ်နေတဲ့ လက်ထောက်ဥက္ကဌ ရာထူးအတွက်
အထူးသင့်တော်တဲ့ သူငယ်လေးတစ်ယောက် တွေ့ထားပါတယ်။
သင့်လက်ထဲမှာ ဘာမှမရှိလဲ သင့်မှာ positive attitude ရှိရင်...
Posted by Ree Noe Mann at 8:15:00 PM5comments:
"သူက ကိုဝေဠု၊ မြင်းခြံသား။ အိမ်ကလေးတို့ ဖောက်သည် ပွဲကတော်ကြီးရဲ့ တူဝမ်းကွဲ တော်တယ်"
အိမ်ကို ရောက်လာကြသူတွေနှင့် ပတ်သက်လို့ သည်လောက်သာ သိကြရသည်။ မိတ်ဆက်ပေးသည် ဆိုသော်လည်း တောသူတောင်သားတွေ ဆိုတော့ အမေပန်းရုံကလည်း ငုတ်တုတ်။ မလှအုံတို့ကလည်း ငုတ်တုတ်။ မအိမ်ကံ ကိုယ်တိုင် ကတော့ လင့်ဧည့်သည်တွေ ဆိုတော့ ထမင်းခူး ဟင်းလိုက်။ လက်ဖက်ချ ကွမ်းချ။ ဧည့်သည်တွေ အားလုံးက မအိမ်ကံကိုရော အမေပန်းရုံကိုပါ ဟက်ဟက် ပက်ပက် မရှိကြသလိုပင်။ မျက်နှာတွေက အကြွေးဟောင်း ရှိသဖြင့် လာတောင်း နေကြသူများပမာ တင်းတင်း တောင့်တောင့်ကြီးတွေ။ ပြီးတော့ ညစ်ပေပေ ချွေးစေးများဖြင့် အစေးပေါက် နေကြသော်လည်း ရေမိုးသန့်စင်ပြီး အ၀တ်အစား သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် ၀တ်ကြသည်လည်း မရှိ။ ညဘက် ကိုပြေသိမ်း အိမ်ပေါ် တက်လာတော့မှ အကျိုး အကြောင်း မေးရတော့သည်။ မိုးပင် လင်းလုလေပြီ။
"အဲသာ ဘယ်သူတွေလဲ အစ်ကို။ မျက်နှာထား တွေကလည်း ဆိုးလိုက်ကြသာ။ ဘယ်လိုလူတွေ ခေါ်လာသာတုံး။ မအိမ်ကံ တို့ကိုတောင် ခင်ခင် မင်မင် မရှိသလိုပဲ"
"မဟုတ်ရပေါင်ကွယ်။ လူတွေက လူရိုး လူကောင်းတွေ ပါ။ ခုဟာက တော်တော် အရေးတကြီး ကိစ္စတွေရှိလို့ပါ အိမ်ကလေးရယ်။ သည်လို အိမ်ကလေးရ၊ အင်္ဂလိပ်က အထက်ပိုင်း မြို့တချို့ကို ပြန်သိမ်းရင်း ၀င်လာနေပြီ။ တို့ရွာတွေ မှာတော့ သိပ်ပြီး မလှုပ်သေးပေမယ့် မြို့တွေမှာ ရုန်းရုန်းရင်းရင်း ဖြစ်နေ ကြတယ်။ သည်ရက်ထဲမှာပဲ မိတ္ထီလာ လေတပ်ကို အင်္ဂလိပ်က ပြန်သိမ်းလိုက်ပြီ။ တိုက်ပွဲတွေလည်း ဖြစ်နေတယ်"
"မိတ္ထီလာမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေသာနဲ့ သည်လူတွေက မအိမ်ကံတို့အိမ် ရောက်နေကြသာနဲ့ ဆိုင်လို့လား အစ်ကို။ အစ်ကို့ စကားတွေ မအိမ်ကံ နားမလည် ပါဘူး"
ကိုပြေသိမ်းက စကားကို ရပ်လိုက်သည်။ သည့်ထက်လည်း ပိုပြောလို့ မကောင်းနိုင်တော့ဆိုသည့် သဘောလည်း ပါပါ လိမ့်မည်။ ပြောစရာရှိလို့ ပြောပြန်တော့လည်း နားလည်နိုင်စရာ မရှိလို့ ယူဆတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါ၏။ စကားတွေ ကျွံမိသွားခဲ့ပြီ ဆိုတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုပြေသိမ်းက နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေသော သမီးကလေးကို ငုံ့နမ်းသည်။ ကလေးက တစ်ချက် လွန့်သွားရာက ပြန်လည် အိပ်ပျော် သွားပြန်ပါ၏။ ကိုပြေသိမ်းက အိပ်ရာထဲ လှဲလိုက်ပြီးမှ စကားတစ်ခွန်းကို လေးလေးကြီး ပြောလေသည်။
"သူတို့က တိုင်းပြည် အတွက် အသက်လှူထားကြပြီ အိမ်ကလေး။ တိုင်းပြည်အရေးထက် ဘာကိုမှ သူတို့ထည့် မတွက်ကြဘူး ဆိုတဲ့ လူတွေပဲ။ မြင်းခြံသား ကိုဝေဠုက အစ်ကို့ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်း။ ကျန်တဲ့ လူတွေက အစ်ကိုတို့ အိမ်ကို အစည်းအဝေး လာတက်ကြတာ။ အစ်ကိုလည်း သူတို့ကို အခုမှ တွေ့ဖူးတာပဲ"
"အခု သူတို့ စကားတွေ ပြောကြတုန်းလား"
"မဟုတ်ဘူး အိမ်ကလေး ပြန်ကြပြီ။ အစ်ကို ကြက်တငို အိုးပေါက်ဘက်က လှည်းလေးစီး မိုးလင်းခါနီး အရောက် ထင်းတွေတင်ပြီး လာခဲ့ဖို့ ကြိုမှာထားတာ ရောက်လာကြလို့ တစ်စီး တစ်ယောက် စီးပြီး ပြန်ကြလေရဲ့"
မအိမ်ကံ မျက်လုံးတွေသာ မှိတ်ထားရတော့သည်။ နားလည်ဖို့ပင် ခက်ခဲလှချည့်လား။ ထိုညက ကိုပြေသိမ်း အိပ်မပျော်သလို မအိမ်ကံလည်း အိပ်မပျော်ခဲ့။
ကိုပြေသိမ်း ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ။ ဘာအစည်းအဝေး များပါလိမ့်။ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ နိုင်ငံရေးက လွဲ၍ အခြားမဖြစ်နိုင်။ မအိမ်ကံ ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံး အိမ်မှာ နိုင်ငံအရေးတွေသာ ထပ်ကာထပ်ကာ ကြားနေခဲ့ရသည်။ အဖေ့ လက်ထက်မှာရော၊ အစ်ကိုရော၊ ကိုပြေသိမ်းပါ ဘာကြောင့် သည်လောက် စိတ်ဇောတွေ သန်ခဲ့ကြတာပါလိမ့်။ မအိမ်ကံတို့ နိုင်ငံဟာ ဘယ်တော့များမှ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ရှိလာမှာပါလိမ့်။ သည်လိုပဲ အင်္ဂလိပ်က အုပ်စိုးလိုက်၊ ဂျပန်က တက်လာလိုက်နဲ့ လုံးလိုက်နေမှဖြင့် မအိမ်ကံတို့ မိန်းမသားများ အဖို့ အဖေရယ်၊ အစ်ကိုရယ်၊ လင်သားရယ်လို့ ဒိုးတူပေါင်ဖက် ဘယ်တော့မှ အတူ နေရမှာပါလိမ့်။ မအိမ်ကံ တွေးနေခဲ့မိသည်။ သည်ဘက်လတွေထဲမှာပဲ ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီး တိမ်းပါး ခဲ့ရသည်။ အဖေ သေတာတောင် ပြန်မလာနိုင်သည့် သားဖြစ်သူ နိုင်ငံရေး သမားကြီးကို အဖေ့ခမျာ တွေ့ချင်ခဲ့ ရှာလိမ့်မည်။ အခုတော့ အိမ်မှာ ယောက်ျားသားရယ်လို့ ကိုဖိုးငွေတို့ သားအဖ တစ်တွေ ရှိသည် မှန်သော်လည်း ကိုပြေသိမ်းက လူရင်းဖြစ်ရမည့်အစား သူကိုယ်တိုင်က မရှိတာ များနေတာကို မအိမ်ကံ သဘောမတွေ့တာ ကြာပြီ။ မအိမ်ကံ နှုတ်က မပြောသာတော့လည်း မပြောခဲ့။ သို့သော် ဇနီးမယား တစ်ယောက် အနေဖြင့် သိစရာ ရှိတာ သိချင်သည်။ ကြားစရာရှိတာ ကြားချင်သည်။ တစ်ခါတလေ အင်္ဂလိပ် စာအုပ်ကြီးတွေ ပါလာတတ်သည် ဖြစ်၍ နေကုန်နေခန်း ထမင်းမစားတမ်း သည်းကြီးအူပြတ် မက်ရေစက် ရေဖတ် နေတာတွေလည်း ရှိသည်။
လင်နှင့် မယား ဆိုပေသိ အသိတွေကွာသည်။ ပညာရည် ကွာသည်။ တွေးပုံခေါ်ပုံတွေ ကွာသည်။ ကိုပြေသိမ်းလို မြို့သား၊ ပညာတတ်၊ နိုင်ငံရေးသမား တစ်ယောက်နှင့် ညားမိတာ တောသူမ အိမ်ကံအဖို့ သိမ်ငယ်မိတာ လိုလို၊ နာကြည်း မိတာလိုလို ခံစားရတာလည်း အမှန်ပင်။
ကိုပြေသိမ်းခမျာ ကျီးတို့ကြား နားမိသည့် ဟင်္သာပမာ အသွင်ခြား၊ အမြင်ခြား၊ အဆင်ခြားရတာကိုလည်း မအိမ်ကံ နားလည်ပါ၏။ သည်တော့လည်း သမီးကလေး တပွေ့ပွေ့လုပ်ရင်း လယ်ကော ရေမရသလို နေခဲ့တာနှင့် ပြီးရတော့သည်။ သည်အဖြစ်အပျက်ကို သတိရ မိတော့လည်း သြော် သူကတော့ သူ့အလုပ်သူ ကြိုကြိုတင်တင် လုပ်နှင့်တာပါလားလို့သာ ခံစားမိရပါ၏။ ဖိုးကူးကို မေးတော့လည်း သိသလောက်သာ ဖြေနိုင်သည်။ မယားစင်စစ် ဖြစ်ပါလျက် ဘာမှ သိခွင့်မရတော့မှ ဖိုးကူးက သူ့ထက် ဘာမှ ပိုမသိနိုင်တာကိုလည်း စိတ်မဆိုးချင်တော့။ အမေပန်းရုံနှင့် မလှအုံတို့ကတော့ သမီးအဖြစ်ကို ယူကျုံးမရ ဖြစ်ရသည်က လွဲ၍ အခြား ဘာမှမပြောကြပါ။
"ဟံသာဝတီနဲ့ ဘုရင့်နောင် ယောင်လို့တောင် ခွဲမရသလိုပါအေ။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ညည်းလင်က ယောင်လို့တောင် ခွဲမရမှတော့ ပြောရသာ ခက်သားအေရဲ့။ မောင်မြတ်သာ ကြည့်ပါလား။ မယားကလေး အသစ် စက်စက် ထားရစ်ခဲ့သာကြည့်။ စိမ်းမြဘက်က နာလို့ပြောသာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖအေသေသာရော ညည်းအစ်ကို အလောင်းတောင် မပိုက်လိုက်ရဘူး မဟုတ်လား။ မအေသေရင် ဖျာနဲ့ အုပ်ထားဆိုသာ မျိုးတွေဟဲ့။ ညည်း ယောက်ျားလည်း သည်အစားထဲက ဥစ္စာ"
မလှအုံကတော့ ကရုဏာဒေါသော ပြောရှာပါ၏။ အမေ ပန်းရုံကတော့ ချိုသည်လည်း မပြော၊ ခါးသည်လည်း မဆို။ ကိုပြေသိမ်းကိုလည်း အပြစ်မမြင်။ ဇနီးမယားကို မညှာလေခြင်း၊ ပလူမွေးပလူတောင် အခါလည် သမီးကလေးမျက်နှာကိုမှ မထောက်လေခြင်းရယ် လို့လည်း မရှိ။ လင်သားဆုံးတာ တစ်လရှိသေး၊ သမက်က တစ်ပူရယ်လို့လည်း ရင်ထုမနာ မဖြစ် ရှာပါ။ သို့သော် စိတ်လက်တော့ ချမ်းသာပုံ မရရှာ။
Posted by Ree Noe Mann at 12:15:00 PM3comments:
အဖေ..... ကောင်းရာ ဘုံဘဝမှာ
ရောက်ရှိနေပါစေ လို့ သားဆုတောင်းလိုက်ပါတရ်ဗျာ။
နောက်လ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့ ဆိုရင် အဖေ ဆုံးတာ (၇)နှစ် ရှိသွားခဲ့ပြီ။ အဖေက ကျနော်ကိုအရမ်းချစ်တာဗျာ။ အဖေ ကျနော်ကို ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုရင် ကျနော် ၁၀တန်းကျောင်းသားအရွယ် ရောက်တဲ့အထိပဲ။ ( အဖေတွေ သူ့သားလေး ကိုချစ်ရင်း ဘာလုပ်တယ်လို့ ထင်လဲ) အဲ့လို့ လုပ်တာဗျ။ သိချင်ရင် ကိုယ့် အဖေကို ကိုယ် မေးကြည့်။
အဖေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ရှိသေးတရ်ဗျ။ နောက်ရက်ကျမှ ရေးတော့မရ်။ ဒီနေ့တော့ အဖေကို အရမ်းသတိရနေလို့ ရင်ထဲမှာ လွမ်းလွန်းလို့ ဒီလောက်လေးပဲ ခံစားလိုက်ပါတရ်ဗျာ။ အမေကိုချစ်တက်သလို အဖေကိုလည်း အရမ်းကိုချစ်ပါတရ်ဗျာ။ ချစ်လို့ တစ်ခါတစ်ခါ အပြစ်တွေလုပ်မိပါတယ်။ လုပ်ခဲ့မိတဲ့ အပြစ်တွေကိုတော့ နှောင်မှရတဲ့ နောင်တတွေ နဲ့ မတောင်းပန်တော့ပါဘူး အဖေ။ သားကျေကျေနပ်နပ်ကြီးကို သားခံယူ မှာပါ။
Posted by Ree Noe Mann at 11:40:00 PM 16 comments:
Posted by Ree Noe Mann at 10:40:00 PM 18 comments:
Posted by Ree Noe Mann at 7:10:00 PM3comments:
Posted by Ree Noe Mann at 8:15:00 AM4comments:
Posted by Ree Noe Mann at 10:15:00 AM5comments:
Posted by Ree Noe Mann at 3:30:00 PM 24 comments:
ကြံကြံဖန်ဖန် ငှက် တွေကို သီချင်းဆိုပြိုင်ခိုင်းရတယ်လို့ဗျာ။ ဒီနေ့ မနက် အလုပ်ကိစ္စနဲ့ အပြင်ထွက်တုံး woodland နားမှာပါ။ ကျနော်လည်း ဘာများလုပ်တာလဲ ဆိုပြီးသွာကြည့် လိုက်ပါတယ်။ အချိန်က သိပ်မရတာနဲ့ အမြန်အဆန် ဓါတ်ပုံလေး ပဲ ရိုက်လိုက်ပါတယ်။ အမှတ်ပေးတဲ့ လူတွေလည်း ရှိတယ်ဗျ။ ကြံကြံဖန်ဖန်နော်............
Posted by Ree Noe Mann at 11:27:00 AM 8 comments:
တရုတ်ဆိုက်ဒ်တွေတိုင်းမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ စာတပုဒ်ပါ။ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
သာမန် သူငယ်ချင်းတယောက်က သင်နဲ့ ကတောက်ကဆတ်ဖြစ်ပြီး သူငယ်ချင်း အဖြစ်ကနေ
ရပ်စဲမယ်။ အစစ်အမှန် သူငယ်ချင်းတယောက်က သင်နဲ့ ကတောက်ကဆတ် မဖြစ်ရင်
သူငယ်ချင်း မစစ်ဘူးလို့ ထင်မယ်။
ကြာရှည်ခိုင်မြဲတတ်သည်။ ထိုလူမျိုးကို သူငယ်ချင်း ဟုခေါ်သည်။
Forward mail တစ်ခုမှ တွေ့လို့ ခံစားတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by Ree Noe Mann at 1:15:00 AM 12 comments: